Amathikithi Fortune (Theme Park)
Theme Park Amathikithi Fortune Slots – Bonus Mobile and Online!
Amathikithi Fortune (Theme Park) slot online, eyakhishwa ngo June 2016, kuyinto slot colorful okuletha lonke isihloko park on screen sakho. Uzothola namathuba ukuthatha zonke ugibele isihloko park futhi ujabulele amadlingozi ngokuwina imali yangempela. Kuyoba yinto senzakalo amaqhawe ngoba lokhu slot machine inthanethi futhi mobile uzokunika bulk izici ibhonasi ukudlala nge. Ngeke ukwazi ukunquma ukuthi yiziphi ukugibela umkhethe ngoba zonke ride futhi zonke umdlalo iyakuvuza ezinye imiklomelo ziyakhanga ngokuwina.
Uke wambona yethu Youtube Slots kanye Casino Imiqophi Nokho – bayazivikela lapha!
Ezokuzijabulisa Net kuyinto odumile online video game asathuthuka inkampani ukuthi wethula multiple online Slots mobile njalo ngonyaka. Le nkampani ikhiqiza Slots mobile online okusekelwe themes ezahlukene, like fantasy, ezemidlalo, kanti ezinye Slots kungenziwa isekelwe ubuntu odumile. Yisikhathi sokuqala NetEnt yethula Amathikithi Fortune (Theme Park) slot online, okuyinto lusekelwe colorful isihloko park.
Amathikithi Fortune Slots (Theme Park) slot online kuyinto 5-esondweni slot online nge 50 pay imigqa. Abadlali uzokwazi spin reels kuphela 25p futhi bazokwazi ukwandisa ukubheja usayizi efika ku- £ 250. Umklomelo jackpot nangu £ 2,000 win esiphezulu kungaba okuningi inkulu kakhulu umklomelo jackpot. Lokhu slot online ine izimpawu esiphezulu ezifanele isihloko kanye Rollercoaster kuyoba uphawu sasendle kanye Golden Ticket chitha.
Amathikithi Fortune (Theme Park) slot online uzokunika inqwaba bonus izici. Landing endle ezintathu noma ngaphezulu ngesikhathi umdlalo base kuyoba lucky ngawe ngoba endle ungakwazi kuvele njengamadiski endle embondelene futhi kwenani lokuwina kuyoba omkhulu zokusisebenzisa. Abanye amathoyizi eyayigcwele ngeke bamele lemali uzuze futhi leyo mali niyozenezelelwa akhawunti yakho.
Isici wheel ithikithi yinkulumo umxhwele kakhulu sale slot online. Ungakwazi spin isondo ithikithi kokwehla 3 noma osakaza ngaphezulu. Zama ukunqoba amathikithi esiphezulu ngoba lezi amathikithi izokunikeza i entry isihloko park. Wena uzokwazi ukudlala imidlalo efana Duck Shoot umdlalo, Skee Ball game, Sledge Hammer Game kanye neziningi ezinye imidlalo ngokusebenzisa amathikithi.
NetEnt Gaming uye wethula uhlobo olusha Slots mobile inthanethi ngokuthuthukisa Amathikithi Fortune (Theme Park) slot online. izici ibhonasi Multiple kuhlangene ihluzo colorful ibe le best slot online of 2016.